Awood darrida nidaamka shirweynaha AFLW ayaa la soo bandhigay dhammaadkii wiigga u dambeeyay | 1xbet
Ciyaarta Kibirka ayaa si dhakhso leh u noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah jadwalka horyaalka. Isku soo wada duubnaanta ku jirta waxay ka tarjumaysaa tan kubbadda haweenka si ballaaran, laga soo bilaabo gunta hoose. Dareenka Whitten Oval galabnimadii Axadda, oo ah mid soo dhaweyn iyo diirran, ayaa laga heli karaa dadka faraha badan ee ciyaaraha AFLW ee waddanka oo dhan. Iskudaritaankani waa mid ka mid ah waxyaabo badan oo AFLW ka dhiga mid gaar ah. Laakiin dabeecadda dareenka badan ee dadka ayaa si weyn uga duwan guuldarooyinkii tijaabada AFLW ee shirarka. James Norman Akhri wax dheeraad ah
Shirka A ee Adelaide iyo Fremantle ayaa ciyaari doona Shirka B ee Geelong iyo Carlton siday u kala horreeyaan dhammaadka toddobaadka dambe ee horudhaca ah.North Melbourne iyo Melbourne labaduba, in kasta oo ay badiyeen ciyaaro badan ama ay haysteen boqolkiiba ka sarreeya Carlton iyo Geelong, waxay seegi doonaan finalka. Fremantle, oo badisay lix ka mid ah toddobadii kulan, ayaa seegi doona finalka gurigeeda. Waxaas oo dhan sababtoo ah AFL -ku waxay diideen inay ciyaaraan laba wareeg oo kale. Laba wareeg oo kale.
Dib ugu noqo bilowga xilli ciyaareedka oo ay Waqooyiga ku garaacday Blues 36 dhibcood. Waxay u muuqatay wax aan la malayn karin in Carlton uu ciyaari doono finalka ee uusan noqon doonin Waqooyiga Melbourne. Hadana waxay noqon doontaa Kangarooyinka oo fadhiya kuraasta, kharribaya fursadaha la seegay iyo laga yaabee inay la yaaban yihiin waxa shir ka duwan, ama aan lahayn shirar, laga yaabo inay ula jeedaan xilligoodii ugu horreeyay.Waa wax ay kooxaha kale u malaynayaan inay waliba ku fikirayaan, gaar ahaan kuwa kulankoodu arkay inaanay ciyaarin kooxo ku sii liitaya jaranjarada labada shirba , madaxa kubbadda cagta haweenka, Nicole Livingstone ayaa sheegtay in horyaalku doortay shirarka maxaa yeelay “qayb ka mid ah mantra -ga aan la leenahay AFLW waa inay ahaato mid gaar ah oo hal -abuur leh”. Facebook Twitter Pinterest Carlton Darcy Vescio ayaa sawir iska qaadaya isaga iyo taageerayaasha Whitten Oval. Sawir: Daniel Pockett/AAP
In kasta oo horyaalku ku adkaysanayo gaar ahaanshahooda iyo hal -abuurnimadooda, haddana isla markiiba qorshuhu wuxuu ahaa muran iyo taageerayaashu aad bay uga fog yihiin xamaasadda.Badhtamihii xilli -ciyaareedka, waxa muuqanayey khaladaadka nidaamka.
In kasta oo AFLW ay rajaynaysay in shirarku is -hagaajin doonaan, haddana xaqiiqdu waxay tahay in taasi mar walba macquul ahayn. Sida Kasey Symons uu qoray bishii hore dhammaadkii wareegga saddexaad, ‘shirarku waxay ahaayeen kuwo aan dheelitirnayn bilowgii’. Isku dheelitirnaan la’aantan ayaa sii waday Shirkii A oo caddaynaya inuu aad uga xoog badan yahay Shirka B iyadoo kooxaha A ay ku guuleysteen saddex iyo toban ka mid ah shan iyo toban iskutallaab.Iyada oo afar kooxood oo kale lagu wado inay ku biiraan AFLW sannadka 2020, qaska ay shirarku ka sameeyeen tartanka sannadkan si fudud looma soo celin karo sannadka soo socda
In kasta oo aan qofna saadaalin karin xilli Fremantle lahaa, Ma jirto wax la inkiri karo in Melbourne, Adelaide iyo Western Bulldogs ay ahaayeen saddex ka mid ah kooxihii xoogganaa 2018 guushii North Melbourne ma ahayn wax la yaab leh marka la eego awoodda xiddigga ee ay ururiyeen. Dhinaca kale, Carlton, Collingwood iyo Giants waxay ahaayeen saddex ka mid ah kooxaha daciifka ah 2018.
Midkoodna ma aha qaladka kooxaha shaqsiyeed, gaar ahaan Carlton iyo Geelong. Waxay ku shaqeeyeen nidaamkii la siiyay oo ay adag tahay inaad ka xanaajiso iyaga fursad ay ku ciyaaraan finalka marka nidaamkaasi u shaqeeyay iyaga.Laakiin iyadoo afar kooxood oo kale lagu wado inay ku biiraan AFLW sannadka 2020, qaska ay shirarka ka sameeyeen tartanka sannadkan si fudud looma soo celin karo sannadka soo socda. wuxuu tilmaamay xaqiiqda ah in ciyaartoydu ay ahaayeen ciyaartooy waqti-dhiman ah, oo ku hawlan shaqo, waxbarasho iyo qoysba ballanqaadyadooda kubadda cagta. Ciyaartoyda, ayuu yiri Livingstone, inay daallan yihiin ka dib xilli ciyaareedkii siddeedda toddobaad ahaa. Waa wax aan la yaab lahayn marka la eego xaqiiqada falkaas kufsiga ah. Si kastaba ha noqotee, walaacyadani waxay ku jiraan awoodda horyaalku inay xalliyaan.Iyaga oo marmarsiiyo uga dhiganaya in la xaddido baaxadda tartanka hab ku tusaya in gacmahoodu yihiin xuduudo ku xidhan wax aan macquul ahayn. Calaamadaha Kasey Akhri wax dheeraad ah
Waxa hordhaca shirarku soo jeediyay sannadkii hore welina ay maanta soo jeedinayso, waa in AFL -ku ka caga jiidayo inuu arko AFLW oo sii fida “daaqadda” Febraayo iyo Maarso. Rabitaanka xiisaha leh ee horyaalku ee “hawo nadiif ah”, wax kasta oo macneheedu yahay jadwalka sii kordhaya, ayaa qasab ah inay xaddido AFLW. Laakiin, iyadoo afar kooxood oo cusubi ay soo galayaan tartanka sannadka soo socda, xaaladdu waa mid sii kordheysa.
AFL si fudud uma yeelan karto labada dhinacba. Ma tartami karaan tartanka dhowr toddobaad oo gaagaaban iyagoo isla markaa soo bandhigaya kooxo badan.Uma isticmaali karaan AFLW si ay u koraan ciyaarta oo aan weli u maalgelin sida waafaqsan horyaalka. Ugu yaraan, ma awoodaan iyagoon caburin tartanka. ee koboca AFLW ma tagi doono.